Archive du 20170227
Marc Ravalomanana �Alaintsika ny fahefana�
Sahy ary efa vonona handray fahefana amin�ny taona 2018 i Marc Ravalomanana sy Tiako i Madagasikara,izany no anton�ny fitsidiham-paritra sy fihaonana amin�ireo mpikambana TIM ary hanatontosoana fampihofanana ho an�ireo tompon�andraikitra rehetra ao amin�ny antoko manerana ny nosy.
Tsy mahatoky tena ny HVM Efa mipoapoaka ny fampielezan-kevitra
Fanamarihana ny faha-50 taonan'ny jono makamba teto Madagasikara no natao eto anoloan'ny biraon�ny Antokon-draharaha misahana ny fifamoivoizana an-dranomasina sy an-tanety (APMF) eo amin'ny bord de la mer Mahajanga ny zoma lasa teo.
Anandra Norbert Tokony ho tsaraina ?
Tsy andrenesam-peo intsony na ny tompon�andraikitra voalohany eo anivon�ny mpitandro filaminana, na ny praiminisitra lehiben�ny governemanta, na ny filoham-pirenena sady filoha faratampon�ny foloalindahy manoloana ilay loza tsy roa aman-tany nitranga tany Befandriana Avaratra.
Andron�ny fifamelana !
Nanatsoaka ny fitoriany ilay lehilahy mpitarika fikambanana iray ny vehivavy iray izay nilaza fa notazoniny an-keriny, ka nitory azy. Nanaiky hanala ny fitoriana natao an�ilay mpanakanto iray voalaza fa tompon�antoka tamina fanalam-baraka tany anaty tambajotram-pifandraisana fesiboky ireo rehetra nitory azy.
Fitondrana ankehitriny Miharihary ny tsy fahaiza-mitantana
Tamin�ny herinandro dia efa niaiky mihitsy ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana, Rivo Rakotovao, fa miadana loatra ny fampandroam-pirenena eto amintsika, raha nanokatra atrikasa iray tery amin�ny espace dera tsiadana tery.
PM Solonandrasana Mahafaly Nahazo ny � Prix Mandela du courage 2016 �
Ny sabotsy lasa teo no notanterahana tany Paris-renivohitra Frantsay ny fizarana ny loka Mandela ka nandrombaka ny antsoina hoe �Prix Mandela du courage 2016� ny praiminisitra Malagasy Solonandrasana Mahafaly Olivier.
Taratasin�i Jean Tara fiaingana
Veloma ianao ry Jean fa ny olona efa tafainga ho any Ambohimpandrosoana daholo ! Ianao irery izany sisa ity no hanao toy ny fikan-dRabitro nifaninana nihazakazaka tamin-dRasokatra tamin�ny anganom-bazaha nalaza efa ela iny. Ilaozy misozy eo foana e ! Efa be dia be mihitsy izao ny sokatra lasa lavitra noho isika .
Solontena maharitry ny PNUD Afa-po tamin'ny asa tany atsimo andrefana
Ny alakamisy sy zoma teo no nitsidika ny faritra atsimo andrefana ny solontena maharitry ny PNUD na ny sampan-draharahan�ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana, Violette Kakyomya.
Voasaringotra amina vonoan�olona Mirehareha ho tsy azo samborina ilay olon�ny HVM
Maty nisy namono ny 6 janoary 2017 ny lehiben�ny fandriampahalemana na kal�ny tao amin�ny kaominin�i Mandabe distrika ny Mahabo, Razakandrainy na Ndrainy.
Raharaha Antsakabary Navotsotra ny Ben�ny tan�na, olona 31 hatolotra ny Fampanoavana anio
Niisa 33 ireo olona nosamborin�ny Hery vonjitaitran�ny polisy (FIP) nisambotra ireo olona heverin�izy ireo fa tompon�antoka tamin�ny fitsaram-bahoaka ka nahafaty Polisy roalahy tany Ambalamanga,
Rovan�Antsahadinta Tsy misy mpiraharaha
Vitsy dia vitsy ireo olona tonga mitsidika ny rovan�Antsahadinta, raha ny fitantaran�ireo mponina vokatry ny lalana ratsy dia ratsy mihazo ity vako-pirenena ity.
Lalana Avarabohitra Itaosy Ahiana ho tapaka indray
Ahiana ho tapaka indray ny lalana eny Avarabohitra Itaosy ao anatin�ny kaominina Itaosy. Hatramin�ny nirotsahan�ny ranon�orana no tena nahitana taratra izany.
ECCOVA Mpianatra 900 no navoaka tamin�ny 2016
Fahombiazana tanteraka ny taom-pianarana 2016 ho an�ny Ecole de Coupe et Couture Volana ( ECCOVA). Nihoatra ny 900 ireo mpianatra navoaka manerana ireo ivon-toerana 22 misy azy manerana ny Nosy, raha mihoatra ny 20.000 alina izany tao anatin�ny 22 taona nijoroany.
Fanafihana taksibrosy �RN7 Polisy iray maty rotiky ny bala
Nandriaka indray ny r�. Nitrangana fanafihan-dahalo namoizana ain�olona indray tamin�ny lalam-pirenena fahafito iny, ny alin�ny zoma hifoha ny asabotsy teo, tokony ho tamin�ny roa ora maraina, teo anelanelan�ny Camp Robin sy Ambohimahasoa (10 km miala an�i Camp Robin mianatsimo hiditra an� Ambohimahasoa).